War Murtiyeedka musharrixiinta oo soo saaray qodobbo ay qaarkood su’aalo dhalinayaan | Hadalsame Media
Home Wararka War Murtiyeedka musharrixiinta oo soo saaray qodobbo ay qaarkood su’aalo dhalinayaan
(Muqdisho) 26 Nof 2020 – Rag u badan qaar ka tirsan musharrixiinta u taagan madaxtinnimada dalka oo muddo todobaad ku dhow ku shirsanaa Hotel Jasiira ayaa soo saaray War Murtiyeed ka kooban 18 qodob.
Waxay ka digeen inay Madaxtooyadu ku dhaqaaqo tillaabo lagu qabanayo doorasho “aan la isku raacsanayn” iyagoo ku gooddiyey inay markaas iyaguna qaban doonaan doorasho doceed ”dalka lagu badbaadinayo.”
”Waa in dowladda federaalka ay si deg-deg ah uga la soo laabato maamulka sharci darrada iyo ciidamada ay geysay gobolka Gedo, si loo ilaaliyo midnimada Jubbaland, maamulkana dib ula wareego deegaanka, si ay ugu fududaato qabashada doorashada.” ayaa ka mid ah qodobbada kasoo baxay shirka musharrixiinta, waloow aysan ka hadlin gaboodfalka Kenya ee ka dhanka ah madax bannaanida Somalia.
Waxaa qodobbada ka mid ah qaar khuseeynaya maamulka, amaanka iyo aayaha dalka.
Qodobbada ku aaddan ammaanka doorashooyinka…
Previous articleDAAWO: ”Somaliland, siyaasiyiin & ganacsato kufsi lagu helay ayaa la sii daayaa” – Maxamed Baaruud
Next articleTOOS u daawo: Lille vs AC Milan, Molde vs Arsenal – LIVE (Shaxda Sugan)